On umbuzo lokho iBhayibheli ongeke uphenduleke kafushane. Esikhathini 3rd ekhulwini BC inkosi yaseGibhithe, uPtolemy wayefuna ukuba Library of Alexandria le inguqulo yesiGreki iBhayibheli. Kodwa amaJuda nakathumela kusuka 72 umhumushi engazi ukuthi ukuhumusha. Futhi lokhu kuchazwe yokuthi elandelayo. EBhayibhelini lesiHeberu kukhona amazinga eziningana embhalweni. Okokuqala funda ngezwi ke zibalwa izincwadi ezithile: 7 ngayinye, bese-10 umuntu emunye, 50. ngamunye Futhi kuvela umbhalo omusha, okuyinto Nakho ukuchazwa kulowo odlule. UPtolemy ngaphambilini ukuze uthumele nje umbhalo omkhulu. Yavela kanjalo-ke i-Septuagint - ukuhunyushwa izincwadi zeTestamente Elidala ngolimi lwesiGreki. Kodwa lena kuphela umlando weBhayibheli. Futhi uma ubheka kusukela iphuzu ezwe buka, umbuzo lokho iBhayibheli impendulo eqondile: IBhayibheli - iqoqo lezincwadi, okuyinto zihlukaniswe izingxenye 2: iTestamente Elidala kanye neTestamente Elisha.
Ibhalwe phambi Ukuza kaKristu, imibhalo iTestamente Elidala zingahlukaniswa ngamaqembu amane:
Encwadini yomthetho (umthetho ngesiHebheru - "Torah") kwenye ngokuthi Five Izincwadi zikaMose, futhi aqukethe izincwadi ezilandelayo:
Genesise - indaba ekudalweni kwezwe futhi yomuntu, omnipotence kaNkulunkulu nokuhlakanipha ngothando lwakhe olukhulu, ukubonakaliswa owawungumnyaka ukudalwa komuntu e ngomfanekiso. Genesise uchaza naleyo nhlekelele enkulu - nokuwela komuntu futhi ukuxoshwa kwakhe axoshwa ePharadesi.
Eksodusi - isitshela indaba le Izindawo lwamaJuda esuka eGibhithe. Inhliziyo incwadi - isenzakalo esivelele kakhulu - laseSinayi isambulo. Lena indaba indlela uMose wanikezwa neMiyalo 10 ezivela kuNkulunkulu.
UmLevi - incwadi mayelana nobupristi iTestamente Elidala.
Izinombolo - liyakhuluma ngokuphela isibalo sezizwe zakwa-Israyeli, libe selichaza le ukuzulazula ehlane yamaJuda.
Duteronomi - ukuphindaphinda akuyalayo uMose isizukulwane esisha, abazalwa ngesikhathi uphumo.
Kufinyeta, ake sithi ukuthi izincwadi yomthetho, UNkulunkulu wafundisa abantu umthetho weqiniso, ukuze balungiselelwe ukuthatha umthetho wothando Kristu uyoletha.
Lezi zincwadi zomlando zihlanganisa:
UJoshuwa - iyalandisa we ukunqoba iZwe Lesithembiso.
AbaHluleli - uhlanganisa inkathi esukela ekunqotshweni kwamaKhanani phambi emandleni obukhosi. Ngoba ngaleso sikhathi amaJuda ayenalo kuphela isimo emhlabeni engokwasezulwini.
Ruth - kugcwalisa amabhuku langaphambilini, ugcizelele Life zabantu abavamile.
USamuweli (1-4) - uchaza igebe mlando phakathi ibhodi kweNkosi uSawule nokubhujiswa kwethempeli wokuqala kaNebukadinesari.
IziKronike - Ngaphezu incwadi odlule.
1st Encwadi Ka-Ezra - iqukethe incazelo eningiliziwe ukubuyela kwamaJuda kusukela ekuthunjweni eBabiloni, kanye nokwakhiwa kwethempeli 2nd.
UNehemiya - sigcwalisa incwadi odlule futhi kwembula imininingwane kuzalwa kabusha okungokomoya yamaJuda.
Esteri - le ncwadi isitshela indaba umsuka ukuvela holidi Jewish WePhurimi.
uhlaka Jikelele zalezi zincwadi kwenza etholakalayo ukuqonda ukudoba kuMdali izenzakalo zomlando kanye iqhaza sika Nkulunkulu ezimpilweni zabantu. Ezivela eNkosini yakhe philanthropic yokuzama ukulungisa umuntu unesimo sokona, vula kuye kusukela kusevisi izithombe bese abaphendukela kuye.
izincwadi Didactic - abazalwa imibhalo didactic. Bafundisa indoda ke yindlela edingekayo ukuze ubheke izenzakalo zokuphila kwansuku zonke, ngaphandle kokulahlekelwa emehlweni kaNkulunkulu nemiyalo yakhe:
Encwadi KaJobe - uchaza ukuphila omkhulu zeTestamente Elidala Iovy ngakhethi.
USolomoni Izincwadi - ukusinika uhlobo esankondlo Isonto njengoba umakoti kaKristu.
Psalter - ingxenye ekhethekile imibhalo iTestamente Elidala. ERussia endala zakhe bafunde izinhlamvu. Lena umthombo oyigugu ngomthandazo, futhi zonke imithandazo inkonzo ocebile kule ncwadi. Kodwa into ebaluleke kakhulu wukuthi Psalter igcwele ezicacile ngezimo Kristu.
I zincwadi zeziprofetho - liyincwadi abaprofethi ezine ezinkulu, u-Isaya, uJeremiya, uHezekeli noDaniyeli. Kanye nambili nabanye abaprofethi ezincane. Cishe zonke iziprofetho ezinkulu abekade axhunyiwe nabanye ngendlela ukuzalwa kukaJesu Kristu.
Ngaphezu kwalokho, ukuphathwa kufanele wenziwe lacuketse lwezincwadi zeBhayibheli. Ngenxa yalokho abayikho ngoba bengazange ezigcinwe wokuqala wesiHebheru. Phakathi kwabo, ngokuhlakanipha kwakhe uJesu indodana Sirach, Encwadi Ukuhlakanipha KukaSolomoni, ITobit, kanye nabanye. Letincwadzi akufakiwe Canon, kodwa kufakwe i-Septuagint zikusize futhi uyafundisa. Yiqiniso, ukuthi ukwahlukana ngemacembu okunemibandela. Esikhathini zincwadi zeziprofetho amaqiniso amaningi zomlando, nasezincwadini zomlando, kukhona iziprofetho.
Leyo ngxenye yemiBhalo Engcwele, okuyinto yalotshwa ngemva kokuzalwa kukaKristu, ibizwa ngokuthi iTestamente Elisha, futhi ngokuphelele ezinikele eyodwa indaba ephathwayo ukhiye, futhi umuntu oyedwa ezehlukile - uJesu Kristu, ophelele, nangomusa, futhi igugu aphelele emlandweni wesintu. Singasho ukuthi lezi zincwadi eTestamenteni Elisha limelela incwadi eyodwa enkulu, okuyinto yena, siqukethe izincwadi ezingu-27. Yiqiniso, uma ningahlulelwa by volume, futhi uqale ngokubaluleke kakhulu. Ngesisekelo Amavesi amaningi eTestamente Elisha kukhona 4 amaVangeli:
Gospel ngesiGreki lisho "izindaba ezinhle." Futhi izindaba owaletha uKristu ngokwakhe, futhi uyazi lo nguKristu. IVangeli ukhuluma kwendlela uNkulunkulu asungula kaKristu, ukuzalwa kwakhe okuyisimangaliso, ngokuhlakanipha intombi okungavamile, ehlushwa cross, ukufa, ukuvuka wayo odumileyo, wenyukela ezulwini. Maqondana lonke izincwadi eTestamenteni Elisha yeVangeli encwadini amaqiniso ayisisekelo.
IZenzo zabaPhostoli akunakubangelwa izincwadi ezingokomlando eTestamenteni Elisha. Le ncwadi isitshela ngesikhathi impilo imiphakathi yokuqala yamaKristu, ukushunyayelwa yabaphostoli. Futhi zibalwa wombhalo ukuze 21 eTestamenteni Elisha zokuxhumana umyalezo. Zabaphostoli. Ziyakwazi isitatimende amaqiniso eziyisisekelo zokholo lobuKristu.
Phakathi kwazo zonke izincwadi the New Testament kukhona esinye isici - Apocalypse. Leli gama lesiGreki lisho "isambulo." Kule ncwadi sifunda ngekusasa zeSonto nezwe, mayelana kanzima yeSonto ukuze amelane nayo yonke fiend, kwendaba, ukunqoba kukaJesu Kristu futhi ukunqoba iWundlu likaNkulunkulu phezu amabutho lobumnyama.
Yilokho liqukethe futhi kanjani ngokuhunyushwa iBhayibheli Orthodox. Kepha akusimina kodwa anikeze impendulo eqondile embuzweni ukuthi yiBhayibheli. Ngokusho Umphostoli UPawulu, uma umuntu efunda iBhayibheli, futhi akakholelwa Kristu, ingqondo yakhe waphuphuthekisa, isihenqo okusengqondweni yabo. Kuze kube manje, amaJuda, ukufunda iBhayibheli, + waqonde amazwi kodwa hhayi lokho okushiwo umbhalo kuphela. Kuyadingeka ukuba sicacise ukuthi amaJuda, eholwa uPawulu wayesho abantu abakholelwa ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu.
Eminyakeni engaba ngu-200 edlule, St Serafim Sarovsky mayelana umbuzo ngalokho iBhayibheli: IBhayibheli - kukhona encwadini ephefumulelwe uNkulunkulu, ngokufunda ukuthi ungakhuluma noNkulunkulu. Uma ufunda iTestamente Elidala, bese ukhuluma noNkulunkulu, futhi uma ufunda iVangeli, iNkosi elikhuluma kini. Uma umuntu nge kuzogxilwa ukufunda lonke iBhayibheli, uJehova ngeke abashiye lokhu feat ngalokujulile bese baniketa umvuzo lesi sipho ezincisha injabulo yokuqonda.
Sekuyiminyaka eminingi, kodwa akekho oye angigodlanga amazwi lenkulu ongcwele. Mhlawumbe lena ngakho?
Ivan le Fool. Inganekwane mayelana Ivan le Fool: igama. Russian inganekwane mayelana Ivan le Fool
Uyini lokuhoxisa. Ngokungafani isikhalazo Ephakeme ngu